I-Yoga ebusweni okanye efana neendlela eziyinkimbinkimbi ezikunceda ukufezekisa ukuvuselela ubuso kunye nomzimba ophilileyo, ukukhulula ingqondo yomntu. Injongo yale nkathazo kukuqeqeshwa kweso sikhundla kunye nokukwazi ukulawula iimvakalelo zomntu, ukukwazi ukwenza umzimba, ubuso kunye nengqondo ingabi nangoxinzelelo, ngokubanzi ukuba ibe yinto ehamba phambili kunye neeplastiki. Imisipha, ngenxa ye yoga ebusweni, ukuphumla, inani leembimbi ezifunyenwe, ubuqhophololo nokukhukhuma kwehla. Kodwa eqinisweni, kunye nokuphumula okunjalo, intukuthelo, ukwesaba, ukungaqiniseki, kunye netyala kuya kuhamba.
Ukuze wenze ubonakala uphumule, ungaphuli, kufuneka wenze oku okulandelayo:
Ukuzivocavoca "ukubetha ebusweni." Ukulahla izihlathi zakho ngeminwe yakho, ungayenzanga nto, kodwa kuyimfuneko ukuba umtsalane we-slap ungena ngaphaya kwe-cm. Yenza oku malunga nomzuzu omnye, kodwa de kubekho ukufudumala okufudumele kunye ne-porozoveniechak. Kwaye ke uthepha izicubu ezithambileyo, eziphantsi komhlathi, kuphela i-nerall. Zama ukuqinisekisa ukuba ukuphazamiseka okuvela kwi-slap kungena ngaphaya kwehafu yesentimitha. Musa ukulimaza! Ngaphandle koko, endaweni yokuphucula ukuhamba kwegazi, ufumana i-spasm.
Inzuzo kukuba kukho ukuphucula ekuphumeni kwegazi, oko kukuthi, izinto sele zinyusa kakhulu kwiifom, ngelixa inkunkuma ikhutshwa. I-lymphatic drainage - ukunciphisa i-edema, izihlathi kunye neyesibili. Imisipha ye-Intradermal ityuned, okungukuthi, inxalenye engezantsi yobuso ixutywe - oku kubonwa njengomsebenzi onamandla kakhulu wokuxhoma izihlathi.
Ukuzivocavoca "amehlo amakhulu". Beka isicatshulwa sakho somnwe phantsi kweloyihlo kunye neliso, kunye nesithupha ephantsi kweso. Cindezela kwithambo njengokungathi uqhube iminwe - i-cheekbone phantsi, kunye necala langaphambili, kodwa ungayitshintshisi isikhumba. Lo msebenzi kufuneka uqhutywe ngentshukumo enye, ungabambeli ngongqongqo njengengcinezelo ebonakalayo malunga nomzuzu. Emva kokugqiba, mamela indlebe - kufuneka ibe yintsha, oko kukuthi, amehlo kufuneka aphumle, ivakalelwa ngathi ikhulu kakhulu.
Ukuzivocavoca "imoto". Zama ukwenza umsindo kunye nemilomo efana nomsebenzi osebenzayo, cinga ukuba ungumntwana odlala i-helicopter. Phenduka ngelo xesha kunye nentloko yakho, ngokungathi udweba impumlo ngendlela yokuhamba kwendiza ye-helikopta ecingelwa nguwe, umjikelezo wentshukumo kufuneka ube ngamasentimitha ayishumi ububanzi. Intloko iyajikeleza, njengokungathi yinto ekhethiweyo, sebenzisa ukuhamba kwenxalenye yentamo. Xa kuvela imfuneko, bhuqa, uze uqhubeke apho uze uhlambele emlonyeni. Emva koko, utshintshe indlela yokuhamba.
Yintoni ukusebenzisa lo msebenzi? Ukwandisa umthamo we-gubi uphucula umbala wabo wendalo. Umthamo ofunekayo wokuhamba ufumana i-vertebrae ephezulu yomlomo wesibeleko. Amehlo, i-nasopharynx kunye neendlebe ziphucula ukugcina. Iinqwelo ezikwisiseko sekhayi, kwakhona, ziphucula umsebenzi wazo.
Ukuzivocavoca ukuba kwenziwe ngosuku
Ndiyabulela kule mizivo, uza kuhamba ngokukhawuleza ngokusebenzisa i-hustle esebenzayo, iya kusebenza ngokufanelekileyo kwaye ipholile, ayiyi kubandakanyeka kwimpikiswano edala imizwa eninzi.
Ukuzivocavoca "ilitye leelwimi." Hlala phantsi, uwela emilenzeni yakho, umva wakho kufuneka uqonde, izandla zithatha amadolo akho. Emlonyeni, qalisa ukunyakaza kokujikeleza ngolwimi, i-amplitude kufuneka ibe yona mkhulu, sebenzisa iinzame zokwenza iigums. Ukuhlaziywa kweedola ngokulandelelana kwamashumi amathathu anesithandathu, ngokubanzi. Unako ukujikeleza amehlo akho ngexesha elifanayo, ukwenzela ukuba zijikeleze ii-clock kunye nokujikelezwa kolwimi. Kuyinto enqwenelekayo ukufaka ukujikelezwa komzimba ophezulu - oko kuthiwa yi-Sufi. Emva kokwenza umsebenzi, phulaphula iimvakalelo eziye zavela emlonyeni wakho, phantsi kolwimi, kwicandelo elisezantsi le-occipital.
Iingeniso zalo mzekelo zi: ukulula zonke i-glottis complex, ukusekwa kwemilinganiselo ye-vertebrae ephezulu, ukuphucula ukusebenza kweempahla zeckull. Lo msebenzi uvimba iingxoxo zencoko zangaphakathi. Yenza emva kokuxabana komsebenzi okanye ukuxabana, ngoko-vamudastsya uhlale uxolo.
Ukuzivocavoca "umhlathi wentambo". Uhleli edeskini, ubeke izibhambathiso phezu kwakhe, ubeke iifomethe entendeni yesandla sakho. Iimisipha zikhululekile, amehlo avaliwe, izandla zivakalelwa ngumhlathi wesikhumba. Kubonakala ngathi izandla zakho zilawulwa ngumhlathi. Nika le ngcaciso ngemizuzu emibini. Kulo mzuzwana, imihlathi iyakhiwa kwaye ikhululeke kwiimvakalelo, kuba ilizwe elingaphakathi kunye nolwazi lwethu ludibene nomhlathi. Lo msebenzi ubaluleke kakhulu emva kokuxinezeleka okanye ukuxinezeleka. Amava abonise ukuba ukuqeqeshwa ngendlela efanelekileyo kukunika umphumo ocacileyo.
Ukuzivocavoca okufuneka kwenziwe kwantambama
Baya kuncedisa ukuphumla, balungiselele ingqondo kunye nobuso malunga ne-cob.
Ukuzivocavoca "u-air kiss". Lo msebenzi ungenziwa ngamabini, uhleli phantsi, ngelixa ufanele ukhangele amehlo. Unokwenza lo msebenzi kwaye ujonge ukucinga kwakho kwisibuko. Ukukhupha imilomo yakho, uyibophe ngokungathi ulungiselela ukumanga, uhlale kwindawo enjalo kwaye ukhululeke. Phinda konke oku kufuna izihlandlo ezithandathu.
Ukuzivocavoca "isilwanyana". I-Pogrymasnichayte imizuzu emibini okanye emithathu, njengokuba ubuntwaneni. Zama ukulahla i-mask yomphakathi, eyongezelela imibimbi. Ukuzivocavoca oku kungathatha indawo enzima, echazwe ngasentla kwepryoslovii, ukuba uya kukhululeka ngokukhululeka. Ukwenza umphumo ube nzulu, tshintsha ibinzana ebusweni bakho ngokuqhelekileyo, ngoko iimpazamo emva kwakho ziza kuzincipha.
Ukuzibulala, ukukhusela ukukhukhuma phantsi kwamehlo. Ngaphambi kokuba ulale, gcoba izigulana emva kwentamo yakho ukuze ubuso bakho bubutsha ekuseni. Isihluthulelo sokususa kwi-Yoga ebusweni kubangelwa kwizinto zangaphakathi nezangaphandle.
Ukunyamekela kweNqatha kwiJapan
Izixhobo zeDarsonval ziphilisa ngokupheleleyo isikhumba kunye neenwele
Ikhekhe leshokoledi kunye nama-alimondi
IHososcope yonyaka we-tiger ngenkunzi
Imibala ephathekayo yenkomo yemilomo entwasahlobo-ehlobo 2016
Yiyiphi imitshato engalinganiyo?
Umgaqo we-cream depilatory
Inkqubo "ebangelisayo" yekwindla nobusika 2015-2016
I-Shrimp esuka kwi-shrimps ne-sesame
Isidu esivela kutyisi